IXiaomi igqitha uFitbit kunye noApple kwaye sele ingumenzi wokuqala wezinto ezinxitywayo kwiplanethi | Iindaba zeGajethi
UJose Alfocea | | Izixhobo ezinokunxitywa, Izaziso
Isigebenga saseTshayina uXiaomi uyaqhubeka nokukhula ngaphakathi nangaphandle kwelizwe lakhe. Kakhulu kangangokuba ngokokuqala ngqa, igqithile kwi-Apple kunye neFitbit kwaye sele kunjalo oyena mvelisi mkhulu wehlabathi wezixhobo ezinxitywayo.
Oku kutyhilwa yingxelo elungiselelwe yinkampani yohlalutyo yeQhinga lohlalutyo apho kubonakale khona ukutyhilwa kukaXiaomi, kwangaxeshanye Ukuthengiswa kwesixhobo seFitbit kwehle ngama-40 epesenti kwikota yesibini ka-2017.
2 Iimpawu ezimbini ezikhulayo, iindlela ezimbini zokuqonda icandelo
3 Ikamva elikhawulezileyo leXiaomi kunye neApple
Ngokwokugqibela kufunda ilungiswe yi-Strategy Analytics, UXiaomi ukwazile ukugqitha iApple kunye neFitbit yiyo loo nto uye waba ngoyena mthengisi mkhulu wezixhobo ezinxitywayo emhlabeni. Ngokwengxelo le, inkampani yaseTshayina ngewayethengise iiyunithi ezizizigidi ezi-3,7 ngekota yesibini ka-2017, I-Fitbit's 3,4 yezigidi kunye ne-Apple's 2,8 yezigidi Ngexesha elifanayo, nangona inyani iApple yayiya kuba namava okukhula okuthe kratya kunenkampani yaseTshayina. Ngaphandle kwezi ntlobo zintathu, zikhona ezinye izixhobo ezinxibekayo ze-11,7 yezigidi ezithengiswe kwikota yesibini ka-2017, elingana neepesenti ezingama-54 zizonke.
Ngokwepesenti, Zombini iXiaomi kunye neApple zinamava okukhula qho ngonyaka, ejongene nokuwa kweFitbit. Ngale ndlela, ngelixa uXiaomi emkile ukusuka kwi-15 ukuya kwi-17 yeepesenti, i-Apple ikhule ukusuka kwi-9 ukuya kwi-13 yeepesenti, oko kukuthi, amanqaku amabini eepesenti ngaphezulu kwenkampani yaseTshayina. Ngokuchasene noko, iFitbit ishiye isabelo sentengiso se-13 yeepesenti, isuka kwiipesenti ezingama-26 kunyaka ophelileyo yaya kwiipesenti ezili-16 ephele ngekota yesibini ka-2017.
Ukuthunyelwa kwezixhobo ezinokunxitywa ngabavelisi kwikota yesibini ye-2017 kwihlabathi liphela (kwizigidi zeeyunithi) | UMTHOMBO: Uhlalutyo lwesicwangciso
Iimpawu ezimbini ezikhulayo, iindlela ezimbini zokuqonda icandelo
Kuyamangalisa oko iifemu ezimbini ezikhule kwicandelo elinxibekayo, iApple kunye neXiaomi, zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zeli candelo. Ngokwenxalenye yayo, iXiaomi inoluhlu olubanzi lweemveliso ezinxitywayo okanye ezinxitywayo ngamaxabiso okhuphiswano kakhulu abandakanya inzwa yokubetha kwentliziyo kunye nezinye izinto kunye nemisebenzi (sonke siyayazi iMi Band isizukulwana sesibini kunokwenzeka ukuba uthenge eSpain ngexabiso lama-25-30 euros). Ngokuchasene noko, iApple ine-Apple Watch kuphela, iwatchwatch enendlela ecacileyo yeprimiyamu kwaye iphelele ngakumbi ngokwemisebenzi kunye neempawu kwaye imodeli yayo yexabiso eliphantsi iqala nge- € 369. Ke, kunokuchazwa ukuba Zombini iinkampani zimele ezi zinto zimbini zigqithisileyo kwintengiso, ngelixa indawo kaFitbit inokuba phakathi kwenye nenye.
UNeil Mawston, ovela kwinkampani ejongene nolu phononongo, iSicwangciso soHlolisiso, ubonakalisile ukuba okwangoku UFitbit ubeka umngcipheko wokunikezela into oyibize ngegama njenge "intshukumo ye-pincer" phakathi kwe-smartbands ezitshiphu ezithengiswa yi-Xiaomi, kunye noluhlu lwee-smartwatches eziphambili ezenziwe ngu-Apple.
Ikamva elikhawulezileyo leXiaomi kunye neApple
Emva kweminyaka embalwa edanisayo apho uXiaomi azamile, ngaphandle kwempumelelo enkulu, ukugcina ukukhula kokuqhuma kwesiqalo sakhe, umfutho wentengiso e-China, kunye nenkqubela phambili yayo e-India (Iimarike ezimbini ezinkulu emhlabeni) apho inkampani ifumene isigidi seerandi kwingeniso kunyaka ophelileyo, ifake uphawu kwithemba, kangangokuba umphathi wayo, uLes Jun, uthetha "ngenguqu enkulu ekukhuleni kwayo."
Kwaye xa kuziwa kwiApple, amaQhinga oQeqesho aQaphela ukuba amarhe okuba isizukulwana esilandelayo seApple Watch sinokubandakanya uphuculo olubonakalayo kwindlela yakho yokujonga impilo, inokusebenza njenge-Apple ukuba iphinde ibuye kwindawo ephezulu. Nangona kunjalo, okwangoku, uhlalutyo oluqinileyo lubonisa ukuba yile nto yokunqongophala kweendlela zokongamela ezempilo ezixhamlayo kunye nokugcina iXiaomi, ibangela abasebenzisi abaninzi ukuba bakhethe iindlela ezingabizi kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo ezinokunxitywa » IXiaomi igqitha kwiFitbit kunye neApple kwaye sele ingumenzi wokuqala wezinto ezinxitywayo kwiplanethi